Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokuqaliswa | I-Androidsis
Ngaphandle kwesilumkiso sele ifikile. UXiaomi sele ethengisa kwintengiso ezithile ezikhethiweyo ifowuni yakhe entsha, iXiaomi Redmi Qaphela 6 Pro. Kubekho ukuvuza okuninzi malunga nale modeli kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ekugqibeleni ifikile ngokusemthethweni. Ifowuni ekumgangatho ophakathi, emele ubukho benotshi enkulu kwiscreen sayo, ukongeza kwiikhamera ezine zizonke.
Basilindile ezimbini ngaphambili kunye neekhamera ezimbini zangemva kule Xiaomi Redmi Qaphela 6 Pro. Njengesiqhelo kwiifowuni zomvelisi, ime ngexabiso elifikelelekayo kakhulu. Yintoni esinokuyilindela kulo mzekelo?
Lo mzekelo ifikelela kwindawo esele igcwele phakathi kumvelisi waseTshayina. Nangona enkosi kuyilo lwayo notch kunye neekhamera ezine ezikhoyo kuyo, yahluke kakhulu kwezinye iifowuni zenkampani ezikolu luhlu lunye. Ke inokuvelisa inzala phakathi kwabathengi.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro
Ukucaciswa kweXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro
Kwinqanaba leenkcukacha, Le Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro iyangqinelana ngokupheleleyo. Ayisiyeyona fowuni inamandla esiza kuyifumana phakathi kuluhlu oluphakathi, kodwa ithembisa ukusebenza okuhle, kongezwe kwiikhamera, uyilo lwayo kunye nexabiso elifanelekileyo, zizithako zempumelelo. Oku kukucaciswa kwayo:
IsikriniI-IPS LCD ene-6,26-intshi ene-FullHD + isisombululo kunye ne-19: 9 ratio
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 636
i-ram: I-3/4 GB
Ukugcina ngaphakathi: I-32/64 GB
Cámara traseraI-12 + 5 MP ngokuvula f / 1.9 kunye nobukrelekrele bokuzenzela
Ikhamera yangaphambili: 20 + 2 MP ngokuvula f / 2.0
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.1 Oreo ene-MIUI 9 njengobume bokwenza ngokwezifiso
ConectividadI-Bluetooth 5.0, i-WiFi: 802.11 a / b / g / n, i-USB 2.0, i-GPS, i-A-GPS kunye ne-GLONASS
abanye: Ukuvula ngokwaziwa kobuso, ukufundwa kweminwe yangasemva, i-3.5 mm yeaudio audio
UbukhuluUbukhulu: 157,9 x 76,3 x 8,2 mm
Ifowuni ibetha ngokukodwa ngenxa yoyilo lwayo. Siyabona ukuba le Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro yongeza kwifashoni yenotshi, Ibonisa inotshi enkulu esiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku kwifowuni evela kumenzi waseTshayina. Ngokuqinisekileyo lolona phawu lubalaseleyo kwiscreen sefowuni. Ngaphandle koko, uyilo luqhelekile kwinkampani, ngakumbi ngasemva.
Enye into ebalulekileyo yale Xiaomi Redmi Qaphela 6 Pro ziikhamera zayo ezine. Uphawu lwaseTshayina lubandakanya iikhamera ezimbini kwinxalenye nganye yale modeli. Indibaniselwano yelensi yangasemva iyaziwa, i-12 + 5 MP. Sele siyibonile kwiifowuni ezininzi zenkampani, iMi A2 Lite kunye nePocophone F1, banonxibelelwano olufanayo lweelensi.
Ngelixa iikhamera ezimbini ze-20 + 2 MP zisilindile ngaphambili. Into eqhelekileyo kukuba iibrand zaseTshayina zibheja kwiikhamera ezilungileyo ze-selfies, into ecacileyo kule meko. Yintoni egqithisile, ifowuni inobukrelekrele bokufakelwa amandla ukusebenza kakuhle kweekhamera zakho. Esinika ithuba lokuba sibe neendlela ezongezelelweyo zokufota.
Sifumana iinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo kolu luhlu luphakathi kwinqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina. Umahluko phakathi kwabo kukudityaniswa kwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, njengoko usenokuba sele ubonile kwiinkcukacha zabo. Ke iinguqulelo ezimbini, nganye inexabiso elahlukileyo kwintengiso. Ngaphandle koko, iinkcukacha zayo zihlala zifana.
Ngokubhekisele kwimibala, kulindeleke ukuba iXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro betha ivenkile ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka (umthunzi okhanyayo), upinki, obomvu nomnyama. Iya kuba yile mibala mine apho uya kuba nakho ukukhetha olu luhlu luphakathi. Ayaziwa ukuba yonke imibala iya kukhutshwa kwihlabathi liphela.
Ifowuni sele yenziwe ukuba ifumaneke kubasebenzisi base China nase Thailand. Ngokuqinisekileyo iya kuphehlelela kwiimarike ezininzi e-Asiya ngaphambi kokufika eYurophu. Nangona ukukhutshwa kwayo ngaphandle kweAsia kungakaqinisekiswa okwangoku. Ixabiso leXiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro esele ikhutshiwe ukuza kuthi ga ngoku zi-euro ezingama-185 kutshintshiselwano. Nangona kungaziwa ukuba zeziphi iinguqulelo ezineli xabiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro: Ifowuni entsha yeXiaomi ngoku isemthethweni
Ukonwabela usuku lokuzalwa lukaGoogle!
I-Oppo Fumana i-X iya kuba yi-smartphone yokuqala ene-10 GB ye-RAM